Kala iibsiga dabiiciga ah ee nolol-maalmeedka - Talooyin waxtar leh
Tixgalin ku saabsan dabeecada dabiiciga ah ee dabiiciga ah
Alaabada daryeelka waa in ay ahaato mid nadiifisa maqaarka isla markaana ka dhigo qurux. Alaabooyinka intooda badani waxyeello u geystaan ​​caafimaadka. Cuntooyinka badan ee kiriimka waxay ku xiran yihiin cudurada. Sababtaas darted, waa inaad doorbidaa daawada dabiiciga ah ee dabiiciga ah iyo iska ilaali isticmaalka kiimikada inta badan ee suurtogalka ah
Dabcan la isku qurxiyo dabiiciga ah
Caleenta shaashadda, oo laga sameeyey alaabta dabiiciga ah ee dabiiciga ah, ayaa lagu heli karaa noocyo kala duwan, oo leh mango vanilla, rummaan, orange ama dhiig badan. Jeelka qubeyska caadiga ah wuxuu isticmaalaa saliidaha macdanta. Maaddooyinka qurxinta dabiiciga ah waxaad ka heli doontaa saliid qumbaha. Gaar ahaan maqaarka qallalan ama xasaasiga ah, waa mid ku habboon maaddaama uusan hoos u dhigin maqaarka.
Ku samee talooyin ku saabsan alaabta dabiiciga ah
Nafaqada yaryar ee jidhka ayaa sidoo kale si u dulqaadan leh maqaarka xasaasiga ah, maaddaama ay si gaar ah ugu roonaadaan maqaarka. Hase yeeshee, ma jiraan tikidhada ugu fiican, sababtoo ah maqaarku wuu u dhaqmaa si ka duwan. Nafaqada dabiiciga ah waxay leeyihiin waxyaabo dabiici ah oo aan waxyeello lahayn. Waa in aad kala saartaa is-gaarsiinta si wajiga iyo jirkaaga. Wejigu aad ayuu u iftiimayaa qorraxda jirka.
Kombiyuutarka sida qurxinta dabiiciga ah waxaa ku jira kaliya muraayad sunta ah. Kuwani waxay ka tarjumayaan qorraxda sida muraayada. Gaar ahaan maqaarka aad u xasaasiga ah waa in aad isticmaashaa kareemka qorraxda ee dabiiciga ah. Waxay ku sii jiraysaa maqaarka waxayna sidaas u xaqiijin kartaa ilaalin ku filan.
waxyaabaha Attam timaha
Jilicda timaha iyo timaha lagu buufiyo dabeecadda - tayada ma aha oo kaliya bay'ada, laakiin sidoo kale dadka qaba maqaarka xasaasiga ah. Noocyada timaha ee dabiiciga ah kuma jiraan walxaha, daasadaha birta, boodhka dabiiciga ah iyo silicones oo wali timaha nadiif ah iyo iftiin weyn.
Dhanka kale, waxaa jira dhamaan midabada timaha ee qurxinta dabiiciga ah. Midabada dabiiciga ah waxay ku duubaan timaha sida jaakad. Dhirta dabiiciga ah waxay siisaa timaha buuxa iyo iftiinka. Midabka dhirta timuhu ma laha wax daaweeyn ah, midabbo farshaxan ah iyo wax dheeri ah oo macmal ah. Dhirta timaha dhirta sidoo kale waxyeello uma gasho dhismaha timahaaga.
Saliida geedka "german" waa inay ahaato mid waxtar leh oo awood leh sida fiitamiin saafi ah. Bakteeriyada gaar ah ayaa soo saarta qoyaanka qoyaanka ah ee hyaluronic acid. Tani waxay ka dhigaysaa maqaarku inuu yareeyo da 'yaryar iyo waxbadan oo waqti dheer ah.
Waxaa sidoo kale jira xulasho ballaaran oo badeeco ah oo la isku qurxiyo. Waad ku mahadsantihiin isfaham fiican, waxay si gaar ah u isticmaalaan noocyada maqaarka ee xasaasiga ah. Badanaa waxay leeyihiin waxyaabo ay ka kooban yihiin nafaqo iyo nafaqo leh. Uma baahnid inaad sameyso adigoon haysan dhalaaleyaal iyo iftiinka iftiinka marka ay timaado dabeecada dabiiciga ah. Waxyaabaha la isku qurxiyo ee ka sii badan iyo kuwa ka sii badan ayaa la soo saaraa oo ku salaysan asaasaq.
Iyadoo mascara dabiiciga ah waxaad ka heli doontaa indhashare dheer oo qotodheer. Waxay ka kooban tahay maaddooyinka sida saliidda geela. Tani waa saliid degdeg ah oo qallajisa oo si deg deg ah hawada u dejiya, ma qashqashaa mana qalloocin.
Marka lagu daro ulaha daryeelka aan midabka lahayn, waxaa sidoo kale jira casaan ah oo casri ah oo lagu qurxiyo dabeecada dabiiciga ah. Waxay ku jiraan nafaqada dabiiciga ah ee loo yaqaan 'organic nutrients', qoyaanka qoyan ee qoyan iyo cayayaanka dabiiciga ah. Sidaa daraadeed ma dhicin haddii aad ka hesho naas-nuujinta afkaaga.
Maaddooyinka dhirta dabiiciga ah waa in loo isticmaalo si gaar ah maqaarka xasaasiga ah, laakiin sidoo kale haddii aad fiiro gaar ah u leedahay daryeelka dabiiciga ah iyo deegaanka.
Maaddada kiciyaasha dabiiciga ah waa isbeddel cusub. Waxaa loogu talagalay in lagu quudiyo maqaarkaaga oo aad yareyso dhibaatooyinka maqaarka. Cuntada waxaa laga soo saaraa kheyraadka dabiiciga ah.
Sidee baad u aqoonsan kartaa maaddooyinka dabiiciga ah?
On badeecooyin badan waa waxyaabaha sida "dabeecadda", "dabiici" ama "organic". Si kastaba ha noqotee, waxaa inta badan jira walxo dabiici ah oo alaabtan ah. Akhri faahfaahinta waxa ku jira baakadka. Haddaba sidee u sheegi kartaa haddii ay dhab ahaan tahay daboolka dabiiciga ah? Caawinaad ayaa ku siinaysa shaabad tayo leh oo loogu talagalay qurxinta dabiiciga ah. Kaadida aad ku kalsoon tahay waa, tusaale ahaan, calaamadda dabiiciga ah, shaabadda ECOCERT iyo shaabadda BDHI Qashinka Dabiiciga ah. Noocyada haysta shaabbadaan waa tusaale ahaan alverde, ceel, dr. Hauschka ama Lavera.
Waa maxay faraqa u dhexeeya dabeecada dabiiciga ah iyo qurxinta dabiiciga ah?
Badanaa, maaddada dabiiciga ah ee dabiiciga ah waa qalad si qalad ah loogu qalajiyo qurxinta dabiiciga ah. Maaddada kiciyaasha dabiiciga ah ayaa horeyba ugu jira alaabooyinka kaliya ee leh maaddooyin bayoolaji ah oo yar. Qalabka qurxinta dabiiciga ah ee dabiiciga ah iyo kiimikada ayaa weli la oggol yahay oo aan loo baahnayn. Qalabka qurxinta dabiiciga ah, dhinaca kale, wuxuu ka kooban yahay tayo sare leh, walxo dabiici ah, ma jiraan wax kiimikooyin ah ama qalajiye.
Waa maxay sababta quruxda dabiiciga ah dabiiciga
Maaddada kiciyaasha dabiiciga ah waa inay ciribtirmaan maqaarkaaga. Waxay ka madax banaan tahay waxyeelada iyo hormoonka isbedelka. Waxyaabaha la isku qurxiyo dabiiciga ah kama yareeyo wax kasta marka la barbar dhigo qurxinta maqaarka caadiga ah ee maqaarka ah, waxay kicineysaa is-xukun wanaagsan. Warshadaha leh astaanta dabiiciga ah ee dabiiciga ah ayaa xaqiijiya oo kor u qaadaya ballanqaadyada xaaladaha shaqo ee caddaalada ah iyo ilaalinta deegaanka. Intaa waxa dheer, baaritaanka xayawaanka ayaa ka baxsan su'aasha ku jirta maadada dabiiciga ah. Maaddooyinka qurxinta dabiiciga ah, dabeecadaha dabiiciga ah iyo dhirta ayaa loo isticmaalaa. Cajaladaha dabiiciga ah waxay si dhakhso ah uga xanaajin karaan sanka xasaasiga ah. Isticmaalida dharka caadiga ah, waxay u egtahay sida maqaarka hoostiisa hoostiisa oo aan si fiican u neefsan karin. Si kastaba ha ahaatee, maaddooyinka koolejka ee leh maaddooyinka dabiiciga ah, si kastaba ha ahaatee, samee muuqaalka iftiinka ah iyo jajab.
Maxay tahay u gudubka dabeecada dabiiciga ah?
Maaddada kiciyaasha dabiiciga ah waxay dhaqaajisaa awoodaha dabiiciga ah ee maqaarka, sidaa daraadeed waxay siin kartaa markii ugu horeysay ee sii xumaato. Xasaasiyadu hore ayey u kordhi kartaa, ilaa inta maqaarku u habaynayo isxukun. Tusaale ahaan, marka laga reebo kiriimyada habeenkii caadiga ah, saliida ama dufanku ma isticmaalaan habeenkii, laakiin serum aqueous. Maqaarka engegan, tani waxay noqon kartaa mid aan caadi ahayn. Hase yeeshee maqaarku ma dareemayo miisaankuna wuxu soo celin karaa hab fiican habeenkii. Waa inaad siisaa waqtiga maqaarka, waxaa muhiim ah in aad la joogto taxane alaab. Maqaarku wuxuu caadi ahaan qaataa hal bil si loo hagaajiyo.
Waxaa jira waxyaabo badan oo wanaagsan oo ku saabsan maaddooyinka dabiiciga ah. Maqaarkaaga ayaa loo isticmaali doonaa oo uu ku quruxsan yahay muuqaal wanaagsan.
Qalabka qurxinta ee dabiiciga ah - miro-dhada kuu sameeya
Samee nadiifinta dabiiciga ah ee naftaada
Cuntooyinka qurxinta dabiiciga ah ee guriga loogu talagalay